अमेरिका त आखिर ब्रोइलर कुखुरो नै पो रहेछ
Kumar Shrestha calendar_today १७ बैशाख २०७७, 10:47 am
कोरोना विशेष अन्तर्वार्ता :
(रामविक्रम थापा समकालीन नेपाली आधुनिक कथाकार र कवि हुनुहुन्छ । उहँको जन्म दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी –३, बाम्राङ, खोटाङमा २०२६ साल पुसमा भएको हो । पेसाले शिक्षक र रूचिले लेखक थापाका ‘पात्रहरू’ लघुकथासङ्ग्रह : २०५५), ‘छरिएका कविता’ (कवितासङ्ग्रह : २०५६), ‘बालपोष’ (बालकवितासङ्ग्रह : २०६४ ) र ‘सुनापातालको सुनाझाँक्री’ (बालचित्रकथा : २०७३) लगायत ९ वटा पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन् । सरस्वती मावि दिक्तेल, खोटाङमा विगत् लामो समयदेखि माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा रहेर गणित÷विज्ञान शिक्षण गर्नु हुने थापासँग यो बन्दाबन्दीको समयमा हाम्रा सहयोगी तथा साहित्यकार पेशल आचार्यज्यूले कोरोना विशेष लामो इमेल वार्ता गर्नुभयो । प्रस्तुत छ सोही वार्ताको सम्पादित अंश – सम्पादक)
१) सर, आरामै हुनुहुन्छ ? यो बेला कहाँ र के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– आरामै छु शारीरिक रूपमा । लकडाउनको पालना गर्दै मोरङ घरमा चुपचाप बसिरहेको छु ।
२) कोरोनाका बारेमा विभिन्न चर्चा÷परिचर्चा र अफवाह पनि चलेका छन् यसका बारेमा विस्तृतमा बताइदिनु होस् न । यो खासमा कस्तो रोग हो ?
– विस्तृतमा यथार्थ कुरा त भाइरोलोजिष्ट डाक्टरले त बताउन सकेका छैनन्, मेरो के पिताम ! विज्ञान र प्रविधियुक्त विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई समेत त्राहीमाम पार्ने कोरोना एउटा नवीन भाइरस रहेछ । यो एउटा विश्वव्यापी महामारी रोग रहेछ ।
अमेरिकाको दादागिरीलाई त यसले चकनाचुर नै पारिदियो । खै ! त त्यहाँको प्रविधि र औषधि ? पर्दा त अमेरिकाले पनि केही गर्न नसक्ने कुरा विश्वसामु घामजत्तिकै छर्लङ्ग भयो त ।
३) कोरोना किन धनी र शक्तिशाली देशमा बढी संक्रमणका रूपमा फैलियो ?
– उतै जन्मेर उतै बढ्नु अस्वाभाविक होइन । चाल सम्बन्धी न्यूटनको तेस्रो नियम यहाँ लागू भएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ । क्रिया बराबरको विपरीत प्रतिक्रिया भएर यसो भएको होला ।
४) समग्र युरोप र अमेरिकालाई तवातवा पार्ने कोरोनाले दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरू नेपाल, भुटान, श्रीलंका र भारतमा अपेक्षाकृत रूपमा किन कम संक्रमण भैरहेको देखिन्छ ?
– यस्ता अविकसित देशमा आधुनिक प्रविधिको अल्प विकासले रोगको प्रशारणमा अवरोध पु¥याएरै यस्तो भएको होला कि ! ग्लोबलाइजेसनको न्यून प्रभावले पनि हुन सक्छ ।
५) कोरोना अवश्य पनि एक दिन नियन्त्रणमा आउला तर यो नियन्त्रणमा आइहाल्यो भने पनि समग्र विश्व अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्ने ठान्नु हुन्छ यहाँ ?
– विश्व अर्थतन्त्र त भयावह र धान्न नै नसक्ने होला । यसको ठूलो असर र प्रभाव भने नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरूमै बढी पर्छ । बेरोजगारी र भोकमरी समस्याले सताउने निश्चितप्रायः देखिन्छ । बूढाहरूले पहिलेपहिले भन्ने गरेको कुरा (उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निर्घिणी जागिर) अब प्रमाणित होला सायद !
६) नेपालको सन्दर्भमा भन्दा न पूर्व तयारी नै थियो न अहिले चित्तबुझ्दो पाराले ¥यापिड् टेष्ट (पिसिआर) नै भैरहेको छ तर यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमा भयावह स्थिति किन नदेखिएको होला? के नेपालीहरूमा कोरोना पचाउने शक्ति या इम्युनिटी पावर नै हाइ भएर हो कि ?
– हो, नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर नै हाइ भएर यो अवस्था भएको हुनसक्छ । नेपालको वातावरण र हावापानी तथा वंशानु गुणको कारणले पनि होला । परीक्षणको दायरा धेरै साँघुरो भएकाले रोग लुकेर बसिरहेको अवस्था पनि हुन सक्ने सम्भावना छ ।
७) नेपालको अर्थ व्यवस्था त्यसै त संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अनावश्यक प्रदेशका लफडाहरूले बजेटको सत्यानाश भएको थियो अहिले झन् यो महामारीका अवस्थामा के ती प्रदेश देशका लागि घाँडा सावित भएनन् र ?
– प्रदेश र जिल्लाको काम त अब के छ र ? आर्थिक भार बढाउने बिकामे निकायहरू भङ्ग गर्नु राम्रो ।
८) यो महामारीलाई यहाँ कुन रूपमा लिनु हुन्छ ? कतिले त विना हातहतियार लडिएको ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’ सम्म पनि भन्न भ्याएका छन् । के बास्तवमा यो सुपरपावरहरूका बीच ‘को फष्ट’ हुने भन्ने लडाइँ नै हो त ?
– एक किसिमले सोच्दा यो त्यस्तै जुँगेहरूको लडाइँ हो कि जस्तो नलाग्ने होइन । तर यति साह्रो त नगर्नु पर्ने हो । कसैको कुनै आविष्कारजन्य त्रुटिले यस्तो भएको पनि हुन सक्छ । बाँचिएछ भने यसको जवाफ भविष्यले पक्कै दिने छ ।
९) अब यो कोरोनाको अन्त्य पछि ‘कोरोना अघि’ र ‘कोरोना पछि’ भन्ने मानकको विकास हुुन्छ भनेर केही मानिसहरू अहिलेदेखि नै चिच्याउन थालिसके के यो कु्रा साँचो हो त ?
– अर्थ, शिक्षा, साहित्य, प्रविधि, औषधिजस्ता हरेक क्षेत्रमा कोरोना अघि र पछिको मानक त अवश्य बन्छ नै ।
१०) यो संक्रमणले संसारको मसिहा भनिने अमेरिकालाई नै किन यति आपतमा पा¥याहोला ? प्लिज गतिलोसँग निर्मम ढंगले विश्लेषण गरिदिनुहोस् न ।
– अमेरिकाको दादागिरीलाई त यसले चकनाचुर नै पारिदियो । खै ! त त्यहाँको प्रविधि र औषधि ? पर्दा त अमेरिकाले पनि केही गर्न नसक्ने कुरा विश्वसामु घामजत्तिकै छर्लङ्ग भयो त । सत्य कुराको वकालत गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनमाथि धावा बोल्नु अमेरिकाको कायरता हो । अहिले आएर बुझियो ः ‘अमेरिका त आखिर बोइलर कुखुरो नै पो रहेछ ।’
११) संसारमा महामारीको शृङ्खला केकस्ता रहेका छन् ? तपाईंलाई यो नै त्यस्तो महामारी हो जो पहिलो र अन्तिम पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
– महामारी त शृङ्खलाबद्ध रूपमै आइरहेका छन् । तर यो अलिक मात्र हैन निकै भयावह् महात्रासदी र गम्भीर रहस्यमय हुन गयो । यही नै अन्तिम होला जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले भोग्न बाँकी महामारीहरू अझै आउलान् जस्ता लाग्छन् ।
१२) कोरोना कहरपछि नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र शैक्षिक स्थिति कस्तो भएर जाने संभावना आंकलन गर्नु भएको छ यहाँले ?
– नेपालमा यी सबै क्षेत्रमा ठूलो गिरावट आउने पक्का हो । यो क्षतिको खाडल पुर्न नेपाललाई दसकौँ लाग्न सक्छ र तपाईँले भनेका क्षेत्रहरूमा व्यापक परिवर्तन पनि हुने छ ।
१३) अहिले आएर यो भाइरस अमेरिकाका एक जानीमानी प्रोफेसरले चीनको बुहान युनिभर्सिटीमा गएर पैसा लिएर बनाएको भन्ने पनि समाचार अनलाइनहरूमा देखिनथालेका छन् । के यो भाइरस मानवनिर्मित जैविक हतियार नै हो त ? फेरि अमेरिकी प्रोफेसर र चीनको विश्वविद्यालय यस्ता कन्टोभर्सी समाचार के फेक नै हुन् ? यहाँको भित्री मनले चाहिँ के भन्छ ?
– खै ! यस्तो कुरा त फेक नै जस्तो लाग्छ मलाई त । यदि यो मानवनिर्मित जैविक हतियार नै हो भने अत्यन्तै दुर्भाग्य मात्र हैन, खतराकै सङ्केत हो जैविक विश्वयुद्धको शुरूआत ।
१४) जैविकहतियारहरूको प्रयोग गरेर संसारका महाशक्तिहरू एकापसमा को ठूलो भन्ने अहम्वादी रोगले अघि नै बढ्या हुन त ?
– यो पुष्टि गर्ने अहिले नै कुनै आधार छैन । तर निकट भविष्यमै सत्य कुरा ज्ञात हुनेछ ।
१५) यो कोरोना महामारीको पटाक्षेप कसरी होओस् भन्ने कामना गर्नु हुन्छ यहाँ ?
– कोरोना महामारीको पटाक्षेप भएर मात्र के गर्नु ? यो भन्दा बढी क्षति नगरी यसको पूर्ण अन्त्य यही अवस्थामा प्राकृतिकरूपमै भैदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो कामना हो ।
६५) नेपालमा भुइँचालो जान्छ केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरू ‘भूकम्पविद्’ बनेर निस्किन्छन् र नेपालीहरूलाई ताई न तुईको अर्ती बुद्धि दिन्छन् अनि फेरि विश्वव्यापी कोरानाको महामारी नेपालमा पनि शुरू हुन्छ यसबेला पनि अर्काथरी स्वघोषित बुद्धिजीवीहरू ‘कोरोना विशेषज्ञ’ बनेर निस्किन्छन् । के हो यो नेपालीहरूको मानसिकता ? कि नेपालीहरूको खास काम नै नभएर हो कि ?
– बाठो पल्टेर जान्ने हुनुपर्ने हामी नेपालीहरूको बानी नै हो । कपोलकल्पित भूmट्टा कुरा गर्नमा माहीर नै छौँ हामी नेपालीहरू । अरूको त के कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रका डाक्टरहरू नै धामीपाराले औषधि लेख्छन् यहाँ ।
१७) विश्व अर्थतन्त्र अबका दिनमा के हुन्छ ? सबै पाटालाई सूक्ष्म रूपले केलाइदिनुहोस् न ।
– सूक्ष्मरूपले त अर्थशास्त्रीहरूले केलाउलान् । बेरोजगारी र महङ्गी बढेर विश्व अर्थतन्त्र अबका दिनमा तहसनहस होला जस्तो मलाई लाग्छ । नेपाल जस्ता देशहरूमा त भोकमरीको पनि समस्या हुन सक्छ ।
१८) यो बास्तवमा मानवनिर्मित जैविक हतियार नै हो भने यसले आगामी दिनमा के सङ्केत दिन खोज्या हो ?
– यदि त्यस्तै हो भने मान्नुस् आधुनिक तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भयो अब । विज्ञान र प्रविधिको चरम दुरूपयोग पनि हो यो । धर्मशास्त्रले भने अनुसार कलियुगको अन्त्य भएर सत्ययुग फर्कने सङ्केत त होइन कतै ?
१९) संसारका २०८ देशहरूमा यो फैलिई सक्दा पनि भुटान र तुर्कमेनिस्तान जस्ता केही देशमा यो संक्रमण नफैलिनुको रहस्य के होला ?
– यो कुरा अलिक अनौठै छ । कोरोना संक्रमित संवाहकहरू यी देशमा नछिरेर प्रशारण हुन नपाएको हुनुपर्छ मेरो विचारमा । यी देशले रोग लुकाएको त होइन होला । पैmलावटको क्रम क्रमशः बढिरहेकाले त्यता नपुग्ला भन्ने पनि ठाउँ रहेन ।
२०) के पृथ्वीबाट मानव अस्तित्व लोप नै हुन लाग्या हो त ?
– यस्तो कुरामा ल्याप्चे लगाउनु अहिल्यै अलिक हतारको निर्णय होला । पूर्ण लोप त होइन, मानव छाँट्ने काम पक्कै हुँदै जाला कि ।
२१) यो वार्तामा हामीले सोध्न छुटाएका तर तपाईंले भन्नै पर्ने केही प्रसङ्गादि भए कृपया उल्लेख गरिदिनुहोस् न ।
– लकडाउनको यो बन्दी जीवनमा आफ्ना कुरा यसरी राख्ने मौका दिनु भएकोमा धन्यवाद् । मनमा लागेका हाइपोथेसिस कुरा मात्र मैले यहाँ राख्ने प्रयास गरेको हूँ ।